Mbido Usoro na ọnọdụ
Biko gụọ Usoro na Ọnọdụ ndị a nke ọma. Usoro a na ọnọdụ metụtara ojiji nke Ndụ LifeBogger ọdịnaya. Ọ dị mkpa iburu n'uche na anyị anaghị ekwe ka iji RSS anyị na-azụ na weebụsaịtị maka ịmepụta akpaaka.
Accessnweta ma jiri ọdịnaya nke weebụsaịtị nwere nkwenye na ịnakwere na ịgbaso Usoro ndị a. Usoro ndị a metụtara ndị ọbịa niile. Site na ịnweta weebụsaịtị ahụ, ị ​​kwenyere na iwu ndị a ga-eke gị.
Njikọ gaa na saịtị weebụ ndị ọzọ:
Ọrụ anyị nwere ike ịnwe njikọ na saịtị weebụ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ na-enweghị ike ịnweta ma ọ bụ na-achịkwa LifeBogger.
Ndụ LifeBogger enweghi ike ịchịkwa, ọ naghị enwekwa ọrụ, ọdịnaya, nzuzo nzuzo, ma ọ bụ omume nke saịtị ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ. Ị kwenyesiri ike na kwenye na LifeBogger agaghị abụ onye ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla, ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla, maka mmebi ọ bụla ma ọ bụ ọnwụ kpatara ma ọ bụ kwetara na ọ ga-eme ma ọ bụ n'ihe gbasara iji ma ọ bụ ịdabere na ọdịnaya ọ bụla, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dị na ma ọ bụ site saịtị ma ọ bụ ọrụ dị otú ahụ.
Usoro ndị a ka a ga-achịkwa ma kọwaa dịka iwu International si dị, na agbanyeghị nsogbu esemokwu iwu.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Usoro ndị a, biko kpọtụrụ site na iji fọm kọntaktị anyị.